Valizy mini-drano - PUMA
Ny mpampitohy avo lenta ampiasaina amin'ny fampiharana fambolena mba hiantohana ny rano mikoriana avy amin'ny fantsona lehibe PE mankany amin'ny driplines mitete manda. Ny fingotra famehezana dia takiana amin'ny fifandraisana amin'ny fantsona lehibe. Ny fifandraisana amin'ny dripline dia ataon'ny voanjo. Noho ny fifandraisan'ny valizy, ny rano mikoriana dia azo vonoina na ahitsy amin'ny vola tadiavina.
Toerana niandohana: Hebei, Sina
Anaran'ny marika: Greenplains
fampiharana: Jeneraly, Fanondrahana fambolena
Fampiasana: Rafitra fanondrahana rano mamonjy rano
Technology: Teknolojia famonjena rano
Port: Tianjin, Sina
Size: 16mm / 20mm
16mm / 20mm valizy mitete
Ny valizy mitete dia mampifandray singa ampiasaina amin'ny rafitra fanondrahana rehefa mametraka kasety mitete matevina.
Ampiasaina izy ireo hampifandray ny tadim-peo amin'ny fantsom-panafody PE izay manome rano ny saha.
Ireo mpampitohy manana savaivony 16 mm dia mety amin'ny fampifangaroana kasety mitete miaraka amin'ny halavan'ny tsipika hatramin'ny 200 m, ary ny valva dia mamela ny fanidiana mafy ny fizarana nefa tsy mila mamono ny fanondrahana rehetra.
Ny fitaovana anaovana azy ireo dia mahatohitra ny hafanana tafahoatra sy ny taratra UV.
Ireto mpampifandray ireto dia tena ilaina amin'ny fananganana rafi-drano amin'ny fampiasana kasety mitete.
Ny endrik'izy ireo dia nohamarinina ary mifanandrify amin'ny kasety mitete rindrina manify hafa eny an-tsena.
Ny fisafidianana lehibe an'ireny fittings ireny dia mamela ny fampiasana azy amin'ny fikirakira fifandraisana (miaraka amin'ny fantsona, misy kofehy, kasety hafa).
1. Valiny haingana, mahomby ary matihanina ao anatin'ny 24 ora, 14 ora aorian'ny serivisy amin'ny Internet.
2. 10 taona traikefa amin'ny famokarana eo amin'ny sehatry ny fambolena.
3. Fanohanana ara-teknika sy vahaolana ny lehiben'ny injeniera.
4. Rafitra sy ekipa fanaraha-maso kalitao henjana henjana eo amin'ny tsena.
5. Vokatra feno fanondrahana feno safidy.
6. Serivisy OEM / ODM.
7. Ekeo ny kaomandy alohan'ny santionany.
Previous: Famafazana ny vokarin'ny bokotra varahina
Manaraka: Fametahana irrigation- Garden Series 17MM (POM)
1. Orinasa mpanamboatra na mpivarotra ve ianao?
Mpanamboatra fanta-daza amin'ny rafitra fanondrahana eto amin'izao tontolo izao izahay izay manana traikefa mihoatra ny 10 taona.
2. Manolotra serivisy OEM ve ianao?
Eny. Ny vokatray mifototra amin'ny marika GreenPlains. Manolotra ny serivisy OEM izahay, miaraka amin'ny kalitao mitovy. Ny ekipanay R&D dia hamolavola ny vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
3. inona ny MOQ-nao?
Samy manana MOQ ny vokatra tsirairay, mifandraisa amin'ny varotra
4. Inona ny toerana misy ny orinasanao?
Any Langfang, HEBEI, CHINA. Mila adiny 2 avy any Tianjin mankany amin'ny orinasanay amin'ny fiara.
5. Ahoana no fomba ahazoana santionany?
Handefa anao ny santionany maimaimpoana izahay ary angonina ny entana.
Valizy Mini manohitra ny fivoahana
Mini Valve barbed ho an'ny tape
Valve Mini ho an'ny Layflat
Valve Mini ho an'i Pe
Mini Valve Offtake Miaraka amin'ny Gasket
Valizy mini-drano - LION
Fametahana irrigation- Garden Series 17MM (POM)